Wakhtiga La Qaban Doono Xaflada Ballon d’Or 2017 & Shaqsiga Daadihin Doona Oo La Ogaaday – Kooxda.com
Home 2017 December Spain, Wararka Maanta Wakhtiga La Qaban Doono Xaflada Ballon d’Or 2017 & Shaqsiga Daadihin Doona Oo La Ogaaday
Wakhtiga La Qaban Doono Xaflada Ballon d’Or 2017 & Shaqsiga Daadihin Doona Oo La Ogaaday
Waxa inaga xiga saacado wakhtigii la ogaan lahaa xiddiga ku guulaystay abaalmarinta Ballon d’Or 2017 iyada oo ay sidii caadada ahayd si weyn ugu tartami doonaan xiddigaha Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo.
Xaflada ayaa la qaban doonaa maalinta bari oo khamiis ah kuna beegan 7 bisha December 2017 iyada oo lagu qaban doono caasimada dalka France gaar ahaan Eiffel Tower sida ay xaqiijisay majalada France Football oo bixisa abaalmarintan.
Xaflada ayaa bilaabmi doonta 8:30 habeenimo saacada geeska Africa iyada oo uu tabin doono xiddigii hore ee xulka qaranka France iyo kooxda Tottenham ee David Ginola.
Xiddiga ku guulaystay abaalmarinta ayaa lagu dhawaaqi doonaa marka ay xafladu wakhti socoto iyada oo ay ka soo qayb gali doonaan xiddigo waaweyn oo magac ku leh kubada cagta.
Ku guulaysiga abaalmarintan ayuu si weyn ugu cad-cad yahay xiddiga reer Portugal iyo kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo kaas oo guulo la gaaray kooxdiisa xilli ciyaareedkii hore.
Cristiano Ronaldo ayaa bar-barayn doona Lionel Messi oo horay u ahaa xiddiga ugu badan ee ku guulaystay abaalmarinta iyaga oo mar noqon doona xiddigaha ugu badan ee ku guulaystay abaalmarinta kuna guulatstay min 5 jeer.